Kooxaha Manchester United,Swansea,Everton, Leicester City iyo QPR oo Guulo Gaaray”Sawirro” – Radio Muqdisho
Kooxda Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford 3-1 uga badisay kooxda Aston Villa.Ciyaaryahan Ander Herrera ayaa labadii qeyb ee ciyaarta labo ka mid ah goolasha u kala dhaliyay kooxda Manchester United,halka goolka sedaxaad uu u dhaliyay ciyaaryahan Wayne Rooney.
Ciyaaryahan Ciyaaryahan Christian Benteke ayaa goolka kaliya u dhaliyay kooxda Aston Villa.
Kooxda Manchester United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 62-dhibcood,halka kooxda Aston Villa ay horyaalka uga jirto kaalinta 16-aad,iyadoo leh 28-dhibcood.
Kooxda Evrton ayaa garoonkeeda Goodison Park 1-0 uga badisay kooxda Southampton.
Ciyaaryahan Phil Jagielka ayaa daqiiqadii 16-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Everton.
Kooxda Southampton ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta lixaad,waxana ay leedahay 53-dhibcood,halka kooxda Everton ay horyaalka uga jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 37-dhibcood.
Kooxda Swansea City ayaa garoonkeeda Liberty Stadium 3-1 uga badisay kooxda Hull City.
Ciyaaryahan Bafetimbi Gomis ayaa labadii qeyb ee ciyaarta labo ka mid ah goolasha u dhaliyay kooxda Swansea,halka goolka sedaxaad uu u dhaiyay ciyaaryahan Sung-Yueng Ki.
Ciyaaryahan Paul McShane ayaa goolka kaliya u dhaliyay kooxda Hull City,halka ciyaaryahan David Meyler uu kaarka casaanka ka qaatay kooxda Hull City.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa waxaa garoonkeeda The Hawthorns 1-3 uga badiyay kooxda Queens Park Rangers.
Kooxda Queens Park Rangers ayaa waxaa afarta gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Eduardo Vargas, Charlie Austin, Bobby Zamora iyo Joe Barton.
Ciyaaryahan Victor Anichebe ayaa goolka kaliya u dhaliyay kooxda West Brom,iyadoo kaarka casaanka ah uu ka qaatay ciyaaryahan Youssuf Mulumbu.
Kooxda West Bromwich ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 14-aad,waxana ay leedahay 33-dhibcood,halka kooxda QPR ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseya.
Kooxda Leicester City ayaa garoonkeeda King Power Stadium 2-1 uga badisay kooxda West Ham United.
Kooxda Leicester City ayaa waxaa labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Esteban Cambiasso iyo Andy King.
Ciyaaryahan Cheikhou Kouyate ayaa goolka kaliya u dhaliyay kooxda West Ham United.
Kooxda West Ham United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta tobanaad,waxana ay leedahay 42-dhibcood,halka kooxda Leicester City ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxaha Bayern Munich,Wolfsburg,Moenchengladbach iyo Bayer Leverkusen oo Guulo Gaaray "Sawirro"